50 Dubai condos natolotra amidy any Bitcoin efa novidina rehetra - Blockchain News
50 Dubai condos natolotra amidy any Bitcoin efa novidina rehetra
50 trano ao Dubai no nividy mampiasa Bitcoin. Lingerie tycoon Michelle Mone sy ny mpiara-miasa miliaridera Doug Barrowman, no roa UK mpandraharaha ao ambadiky ny tetikasa. Dia hoy ireo rehetra 50 ny trano ao amin'ny Bitcoin natolotra namidy.
Dia nanomboka ny fanorenana teo am-toerana, miorina ao Dubai ny Science Park, ary izany dia hatao ny vita amin'ny 2020.
Michelle Mone Business Insider nilaza fa nisy ny “mifangaro” ny mpividy fa “betsaka” hifanaraka ny stereotype tany am-boalohany Bitcoin devotees - lehilahy tanora rindrambaiko ao amin'ny T-shirt.
Mone sy Barrowman niresaka varotra amin'ny fampandrosoana ny Dubai nandritra ny resadresaka mba hampiroboroboana ny tetikasa farany, Equi, ny cryptocurrency-Powered sehatra fampiasam-bola.
“Tiako ny mahita ity toerana crypto nampiasaina mba hividy-tena izao tontolo izao fananan'ny,” hoy Barrowman. “Izay no fanahin'ny Equi koa. Izany dia midika hoe transcending ny crypto toerana ho any amin'ny ara-batana sy ny tontolo tena izy.”
Previous Post:Cryptocurrency fifanakalozana BitGrail insolvency manambara aorian'ny Hack
Next Post:Ny mpilalao lehibe indrindra ao amin'ny Cryptomarket